musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Yemahara Pre-show Kudzidza pa IMEX America
Chiremba wepfungwa weHarvard akadzidziswa, vatungamiriri vekusimudzira pasirese, makwikwi ekugadzira zviitiko, nyanzvi yekuzvibata kwevanhu, uye muongorori asingatyi murenje vese vari kutungamira kudzidza ku Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI.
Nyowani ye2021 inoteedzana ye "Headliners," ese akamira-kunze maspika muminda yavo.
Pre-showa kudzidza inosanganisira iyo Executive Musangano Foramu, iyo Association Hutungamiri Forum, uye Iye Anoreva Bhizinesi.
Zvikamu zvakazvitsaurira zvemapoka akasiyana emabhizimusi anotendera vanopinda kuitisa yavo Smart Muvhuro ruzivo.
Pane ramangwana rakatarisana nehurongwa hweSmart Muvhuro - yemahara, izere zuva rekudzidza munaNovember 8, inoitika IMEX America isati yatanga Mbudzi 9-11 kuMandalay Bay, Las Vegas.
Chiremba, munyori uye wepasirese muzvinabhizimusi wemagariro, Dr. Shimi Kang, anotanga iro rine simba-zuva rakatanga. A Clinical Associate Purofesa anobva kuYunivhesiti yeBritish Columbia, Dr. Kang achapa hurukuro yeMuvhuro weSmart. "Kwandiri, nzvimbo inonakidza yesainzi uye nenyaya yebasa rehupenyu hwangu ndeyeuropi yesainzi - kudzidza kuti tiri vanaani uye nei tichinzwa uye kuzvibata nenzira yatinoita. Mune sainzi, tinowana mhinduro dzakawanda uyezve kurudziro yekuenderera mberi mukutsvaga kwedu ruzivo, ”anotsanangura kudaro. Achiendesa izvo zvichangoburwa kudzidza pane iyo neuroscience yehutano hwepfungwa, kusimba, hutungamiriri uye mashandiro, Dr Kang anozopa anoshanda ekutsvagisa-akavakirwa "mirairo" iyo inogona kuiswa ipapo ipapo kune hutano hwakanaka, chishuwo uye chinangwa.
Dr. Shimi Kang, chiremba, munyori uye wepasi rose wezvemabhizimusi wezvemagariro.
Vanotungamira misoro vari pamusoro pebhiri
Nyowani ye2021 yakateedzana ye 'Headliners,' vese vamire-vatauri muminda yavo. Ivo vanotungamira chirongwa chakazara che pre-show kudzidza icho chinosanganisira iyo Executive Musangano Foramu, iyo Association Leadership foramu uye She Means Bhizinesi, chiitiko chakabatana nemagazini yeIMEX neTW, inotsigirwa neMPI.
• Janet Sperstad, weDhipatimendi Director kuMadison College naGuy Bigwood, Managing Director weGlobal Destination Sustainability Movement vese vachatungamira musangano: Remangwana ratiri kuda: Kuchenesa shanduko yekuvandudza. Izvi zvichavakira pane IMEX tsvakurudzo ivo vakabatana-vakanyora iyo yaifukidza hunhu hwenzvimbo uye maitiro ekuisa misimboti yeiyo yakatenderera hupfumi mukugadzirwa kwechiitiko.
• Ruud Janssen naRoel Frissen vavaki veChiitiko Dhizaini Yekutora vanotora nguva yakareba kutarisa kwechiitiko dhizaini. Muchikamu chavo, Dhizaini YOKUSHANDURA - Kukwidziridza kugona kwako kuti utarise uye uite zvinopfuura izvozvi, ivo vachaburitsa kushevedzera kumaoko kuti vatore tarisiro-inotarisana neramangwana.
• Ko kana varongi vezviitiko vakasiya huwandu hwevanhu uye vagamuchira hunhu hwevanhu kuti vagadzire zviitiko zvine simba zvechokwadi? Uyu ndiwo mubvunzo wakabvunzwa naDavid Allison muvambi weValuegraphics. Yake yepasi-kutyora dhatabhesi yenyika inoratidza nei iko kukosha kwedu - kwete huwandu hwevanhu - iyo inotyaira uye inokanganisa maitiro uye kuita sarudzo. Teerera kune iyo IMEX Podcast hurukuro naDavid pano.
Musoro wekupedzisira wemusoro unotora vanoenda parwendo kuenda murenje. Daniel Fox, mutsvaki, wezve mafoto, anofarira mhuka dzesango uye munyori anogovera zvaakaona-grid zviitiko mukati Iyo FOX Mitemo: Ndeipi nguva yangu murenje yakandidzidzisa nezve kugadzirisa njodzi, kusava nechokwadi, shanduko uye maitiro ekushandisa izvo zvidzidzo kuti urarame hupenyu hwakawanda.